DLULA U-Antonov An-24RV FSX & P3D - Rikoooo
Usayizi 158 MB
Play 17 315
Umbhali: Umdwebo weSamdim, u-Andrey Felis, uYevgeniy (Bleyd), uSergey (Dzies) oyi-pribory P3D-64 ukuzivumelanisa nguRikoooo
Kubuyekeziwe on 13 / 08 / 2019: Ukulungiswa kwemisindo yenjini ebingavakali kumandla amakhulu, kungezwe amanye amageythi alahlekile, kungezwe i-GPS GARMIN 500. Ukuguqulwa kwe-autopilot kuye Prepar3D v4. Kusukela i-KLN90B GPS ayihambelani Prepar3D i-v4 (i-64 bits) ithathelwe indawo yinguqulo enemisebenzi ekhawulelwe kuphela Prepar3D I-v4 (alukho ushintsho lwe FSX futhi FSX-Steam). Asikho isidingo sokulanda nokufaka i-KLN90B GPS yabasebenzisi Prepar3D i-v4 okwamanje ayikenziwa ihambisane nale simulator. Ungasebenzisa i-GPS GARMIN 500 ebilungiselelwe ngaphambilini.
Isengezo senziwe Prepar3D I-v4 64-bit iyahambisana neRikoooo.
Nanti elinye isengezo elimelela endizeni ezwe elaliyi-USSR i izinga Amazing ngokwazi ukuthi kuyinto freeware. Lokhu Antonov An-24RV kuyinto oncomekayo, ezifakwe 4 repaints: IzhAvia, AFL, Aeroflot futhi Tjumavi. Abanikeze asebenza nabo virtual ngokugcwele abalingisa e 3D, uzobe kusimangaze Izikali yayo nge 3D kuphela HD ukwakheka, kuzodingeka ukufinyelela eziningi ukushintsha lemiphethweni ezihlukahlukene gumbi. Kufaka umsindo zangempela animations. Ukuba ngokoqobo kwalo mbono add-on eziphambili kakhulu.
I Antonov An-24 kuyinto izindiza twin-turboprop ithwale 44 ukuze 52 abagibeli ekhiqizwa e-USSR, (manje e-Ukraine) by Antonov Engineering. Indiza kulindeleke ukuba usebenze endaweni angadle ngabuhle obutheni futhi saphumelela ikakhulukazi ngisho ne zesiLungu, Nokho nenzuzo yayo commercial kwaba ongaphakeme ngoba kwakungafaneleki abagula ngumuntu mass abawasebenzisayo unladen.
Izinguqulo ezimbili ngokuyisisekelo lempi ziye etholakala kulo, i-Antonov An-26 nge wezimpahla umnyango omkhulu at the ezingemuva futhi Antonov An-30 nge ekhaleni ingilazi sokuqapha kanye nokuhlela ohambweni. (Wikipedia)
KUBALULEKILE: ukuze i-Antonov An-24RV isebenze kahle futhi igweme iphutha "ayikwazanga ukulayisha ama-gauges /sc_acc.dll" kubalulekile ukulanda nokufaka inguqulo yakamuva yegeji ye-KLN90B (GPS), ukufaka le Gauge kuyadingeka kanye kuphela .